Weeraryahanka da’da yar ee Folarin Balogun ayaa soo afjaray calaamatu su’aal saarnayd mustaqbal kiisa kaddib markii uu shalay kooxdiisa Arsenal u saxeexay heshiis muddo dheer. Weeraryahankan 19 jirka ah ayaa Arsenal joogay tan iyo markii da’diisu ahayd 8 sanno isla markaana waxa uu xilli-ciyaareedkan saftay kulamo waa weyn. Agaasimaha farsamada Arsenal Edu ayaa sheegay in ay farxad weyn u tahay in Balogun uu saxeexay heshiis cusub.
Heshiiskii hore ee Balogun kula jiray kooxda Arsenal ayaa ku egaa dhammaadka xilli-ciyaareedkan isla markaana waxaa la hadalhayey in uu dhammaadka xilli-ciyaareedkan ka hulleelo garoonka Emirates iyo kooxda Arsenal isla markaana heshiis xor ah ugu biiro koox kale. Tabobare Mikel Arteta ayaa sheegay in uu aad ula dhacsan yahay qaab-ciyaareedkan uu Balogun xilli-ciyaareedkan muujiyey